Gabagabadu isagoo tirtiray qaar ka mid ah files ugu muhiimsan ee jeer, waxaan oo dhan ayaa dareemay baahida loo qabo qalab kabashada xogta aad u fiican oo lagu kalsoonaan karo ee hal dhibic ama kan kale. Maanta waxaan doonayaa in aan eegno qaar ka mid ah Mac Undelete software ugu fiican ee laga heli karo suuqa hadda. Waxaan isku dayi doonaa inuu ku siiyo dib u eegis peek dhuumasho deg deg ah oo ka mid ah iyo sidoo kale, sidaa darteed waxaad samayn kartaa go'aanno ku dhisan xog at kaas oo ka mid ah si ay u tagaan.
Wondershare Data Recovery waa mid ka mid ah xalka ugu fiican ee aad ka heli karto haddii kabsaday xogta laga badiyay waa waxa aad doonayso in la qabto. Kabsado ama soo celin, software ay tani sidoo kale waxaa oo dhan iyo in aan samayn karo hab aad u fudud. Waxaa xitaa uu baaritaanku your computer si toos ah u dhammaan faylasha in aad u tirtiray aad Mac. Waxa kale oo la nooc oo kala duwan oo ah faylasha sida sawirada, videos, music, emails, waraaqaha iwm shaqayn karaan
• Taageerada kala duwan oo badan oo ay ka mid yihiin noocyada kala duwan ee files video, audio iyo files archive oo ay la socdaan fariimaha iyo emails aad iyo sidoo kale.
• Taageerada kabashada xogta faylasha ay sabab u tahay sababo kala duwan khasaaraha xogta sida formatting, tirtirka shil ah, qalliin aan habboonayn, virus computer, shil disk adag, xijaab burbursan iwm
Waqti tijaabo u ogolaanaya oo kaliya soo kabasho xogta ilaa 100MB
EaseUS Data Recovery Wizard waa software ah soo kabashada xogta weyn oo hab soo celinta ama ka soo kabatay dhammaan xogta la tirtiro in uu noqon karaa haddii kale geli karin ama formatted ay si fudud u weydiinaya su'aalo 2 hanuuniyo dadka isticmaala - 'nooca files Ma rabtaa inaad ka soo kabsadaan, taas oo disk lahaa aad rabto in aad si scan ku raadiso xogta aad in uu lumo '. Ka jawaab su'aalaha 2 iyo software ma inteeda kale aad u.
• Easy in ay isticmaalaan interface, oo la shaqeeya oo kaliya 3 tallaabo - Launch, Scan ceshan
• Miyuu oo dhan shaqada kabashada on gaar ah u leh oo kaliya 2 su'aalaha ugu jawaabay user
Waqti tijaabo waa mid aad u gaaban
Rescue 3. Prosoft Data 3
Rescue Data 4 waa bedelka in mid ka mid ah qalabka soo kabashada xogta ugu isticmaalo OS X iyo waxa ka sii fiican u shaqeeyo. Waxaa la iman 2 qaybood - xirmo rakiban ah ee aad Mac iyo DVD ah Downlaods xaaladaha degdegga ah haddii ay dhacdo dhaawac waa mid aad u daran. Mid ka mid ah qaababka ugu cajiib ah oo Rescue Data 4 waa in ay sidoo kale abuurtaa Gadzhiyev oo buuxda oo ku drive ay ku adag in ay image ah iyadoo baar u macquul ah iyo jir ahaan dhaawac, kaas oo dariiqa ugu wanaagsan ee loo ilaalin karo disk asalka.
• Mid ka mid ah software ugu awooda badan ee liiskan oo aan samayn karo soo kabashada qaar ka mid halis ah ee heer qoto dheer
• engine Scanning in sidoo kale abuuri Gadzhiyev oo ah drive, halka baar
No version maxkamad la heli karo iyo ma aha in haboon laylis ka yar a
Sida Data Rescue 4, Alsoft DiskWarrior 4.4 ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah labada xirmo rakibo ah iyo DVD ah Downlaods. Waa maxay dhigaya waa marka laga reebo haddii xaqiiqada ah in ay la socoto soo kabashada xogta, waxa ay sidoo kale dib u tusaha disk iyo fayl iyo faylasha ku jira iyaga oo ku ogolaaday in dadka isticmaala ay u hagaajin nooc kasta oo dhibaato ah oo kaliya oo gargaar ka mid software. Inkastoo, waayo, habkaani in ay ka shaqeeyaan waa in aad isticmaasho DVD ee khaanada Downlaods.
• Mar kale, software ah oo aad u xoog badan marka loo eego kuwa kale ee liiskan
• hagaajin karaa drives halka baar u burburka weyn
No version maxkamad la heli karo iyo ka yar haboon user a khibrad yar
Waa qalab kabashada xogta ku ool ah in ay xamili karaan oo dhan - kombiyuutarada, drives dibadda adag, laptops, kamaradaha, drives USB, MP3 ama ciyaartoyda MP4 iwm Waxay leedahay aad u fududahay in la isticmaalo interface iyo sidoo kale suudadka dhammaan noocyada kala duwan ee isticmaala computer fudayd. Waxa kale oo ay ku siinaysaa fursad u eegis file ah oo awood u leh inuu ka soo kabsado kuwa files in aad u baahan tahay oo keliya.
• Easy in ay isticmaalaan interface oo weli awood leh oo dabacsan
• Waxay bixisaa version Fidmo iskaanka iyo xogta hubinta
Ma hagaajin karaa khaladaad disk ah
Wixii $ 99.95 ilaa $199.95, Boomerang Data Recovery waa maalgelin istaahilo soo kaban karto, dhammaan noocyada kala duwan ee files badiyay aad u. Iyada oo ay fududahay in la isticmaalo interface, waa waayo-aragnimo wax iska sahlan, waayo, bilaabayso ee kombiyuutarada in la isticmaalo software iyo aad u hesho waxa ay rabaan ka soo baxay waxaa ka mid ah. On top of qaababka dib u soo kabashada, waxa kale oo aad u oggolaanaysaa files gurmad, taas oo aan jeclaa badan.
• Easy in ay isticmaalaan interface iyo muujinta gurmad
• waa aalad awood leh oo weli dabacsan
No version maxkamad la heli karo iyo waa wax yar qiimaha sare kooxda caqliga leh
7-dii TechTool Pro 7
TechTool Pro 7 waa wax la mid ah Data Recovery ay diirada saarayaan horumarinta Mac oo sahlaysa in dadka isticmaala. Waxaa kale oo ay leedahay muujinta kale la yaab leh in kastoo ay darafta sare ee feature soo kabashada iyo in uu yahay waxa Gadzhiyev karo xogta jira ee dayactirka ujeedooyin.
• User saaxiibtinimo interface
• Hagaaji la cloning xogta jira
Xoogaa ka mid ah bummer ah, waxa aanu u taageeraan NTFS iyo files baruurta
Sida loo undelete files on Mac OS X isticmaalaya Wondershare Data Recovery for Mac
Ku bilow ayadoo laga soo degsado Wondershare Data Recovery for Mac by gujinaya halkan . Marka aad u rakibay, abuurtaan software iyo doorto ikhtiyaarka ah 'lumay Recovery File ".
Haddaba, xulo drive ee aad u dhamaatay tirtiray files in aad rabto in aad soo kabsado. Ka dib markii in, ku dhacay on ikhtiyaarka 'Scan' si ay u bilaabaan sugaya files lumay.
Ka dib markii raajo la dhammeeyo, software ah waa in ay muujiyaan liiska faylasha recoverable aad u eegis. Waxaad dooran kartaa kuwa aad rabto in aad soo kabsaday kadibna riix badhanka 'Ladnaansho' si ay u badbaado ee aad Mac. Just la soco in waxaa lagu talinayaa in aad badbaadin files, kuwaas oo qaar ka mid ah drive kale oo aan ahayn mid asalka ah si loo ma aakhirka overwriting files aad isku dayay inuu ka soo kabsado.